प्रचण्डसँग १९ अर्बको हिसाब माग्छौँ : मन्त्री रायमाझी – Satyapati
प्रचण्डसँग १९ अर्बको हिसाब माग्छौँ : मन्त्री रायमाझी
साथीहरूले बाटो बिराउनु भएको छ । संसद पुनःस्थापना सयमा एक प्रतिशत पनि हुँदैन ।
बुटवल । नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य तथा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले युद्धकालमा प्रचण्डले अर्बौं रकम अनियमिता गरेको आरोप लगाएका छन् । त्यसबेला हिनामिन भएको उक्त अर्बौ रकमको हिसाबकिताब गर्ने समय आएको पनि उनले बताए । बुटवलमा पूर्व जनमुक्ति सेना नेपालको राष्ट्रिय भेलामा बोल्दै उनले तीलगायत युद्धकालका धेरै विषयको हिसाबकिताब हुने बताए ।
मन्त्री रायमाझीले भने, ‘१९ हजारको नाम राखेर ३४ हजारको नाममा ल्याएको पैसा कहाँ गयो ? हामी अहिले वैचारिक र राजनीतिक संघर्षका क्रममा छौँ, तर सोध्नुपर्ने बेला आएको छ, १९ अर्ब कहाँ गयो ?, प्रचण्डले जवाफ दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जनमुक्ति सेनालाई बेवास्ता गर्दा उनीहरू आज घर न घाटको भएका छन् ।’ उनले प्रचण्ड र माधव नेपालले आन्दोलनको नाममा सडकमा उटपट्याङ मच्चाई रहेको टिप्पणी गरे ।
‘पार्टीको नेता भएर विवाद मिलाउने हो कि सडकमा जाने हो ? पार्टीभित्रै मिलाउनुपर्दैन ?, मन्त्री रायमाझीले प्रश्न गर्दै भने, ‘उहाँहरू विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्न छाडेर पद, शक्तिका लागि सडकमा जानुभो, साथीहरूले बाटो बिराउनु भएको छ । संसद पुनःस्थापना सयमा एक प्रतिशत पनि हुँदैन ।’ प्रचण्ड–माधव समूहलाई सच्चिएर मूल पार्टीमै फर्किन पनि रायमाझीले आग्रह गरेका छन् ।